छोड्नुस् अब मधेसीलाई गाली गर्न ! - विशाल शाह
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताछोड्नुस् अब मधेसीलाई गाली गर्न ! - विशाल शाह
Tuesday, 24 November 2015 15:14	Rate this item
‘मधेसी चोर देश छोड’ जस्तो कुरा समेत सुन्न थालिएकाले यस किसिमको आवाजप्रति घोरभत्सर्ना गर्दछु । अब जसले यस्तो कुरा गर्दछ, त्यसलाई र त्यस किसिमको पार्टीलाई आतंककारी घोषणा गरियोस् ।
मधेसी र पहाडियामा कुनै अन्तर देखाउने हिम्मत र बुद्धि कसैको भएजस्तो मलाई लाग्दैन । सबै नेपाली होइनन् ? के मधेसी जनतालाई विश्वास गर्नुपर्दैन ? मधेसीहरू नेपाली होइनन् ?
दुई, तीन वा चारवटा प्रान्त मधेस-तराईमा बनाएर यदि समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसो गर्न किन नहुने ? खर्च बढ्छ भन्ने डर हो ? भ्रष्टाचारमा कति खर्च हुन्छ, कामको समस्याले सदरमुकाम पुग्दा कति खर्च जनताले व्यहोर्नुपर्छ ? धेरै प्रान्त बनाउन हुन्न भन्ने कुरामा कुनै तर्क छैन । खाली सबैलाई मान्य हुने नामाकरण र सिमांकन गरिनु पर्दछ । कुनै विषेश जातको नामबाट प्रान्त बन्नु हुन्न भन्ने मात्र हो ।
के बिग्रन्छ यदि बुद्ध प्रदेश, सगरमाथा प्रदेश, पशुपति क्षेत्र प्रदेश, अन्नपूर्ण प्रदेश, मिथिला प्रदेश, सेती-महाकाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, मधेस प्रदेश, तराई प्रदेश आदि राखेर अघि बढ्दा ?होइन अर्कै कारणले मधेसी जनताको संघीयता सम्वन्धी माग पूरा गर्न सकिन्न भने यो अवधारणा नै रद्ध गर्दा देश चल्न सक्दैन र ? संघीयता नभए देशको विकास हुँदैनजस्तो लाग्छ भने पञ्चायत कालमा भएको बिकासकै व्याजमा देश चलिरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा आर्थिक बिकास दर ८-९ प्रतिशत हुन शुरु भएकोमा अहिले माइनस अर्थात नकारात्मक -१% मा जाने देखिएको छ ।
संघीयताले गृहयुद्धमा देश प्रवेश गराइसक्यो । धार्मिक द्वन्द केही क्षणका लागि मात्र रोकिएको छ । यो पुन दोहोरिन धेरै दिन बाँकी छैन । नेपाल असफल राष्ट्र भइसकेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? राजा ज्ञानेन्द्रले जसले यस्तो हालत आउन सक्छ भन्ने थाहापाउँदा पाउँदै राजगद्दी छोडेर कुकर्मीहरुलाई संपूर्ण कुरा छोडिदिए या ती नालायक पार्टीका नालायक भ्रष्ट राजनीतिका पेसेवरहरुले ?
या हामी अन्धो नेपाली जनताले जसले ज्ञाने चोर देश छोड भन्दै कराएर विदेशीको दलाली गर्दै थियौं ? आज फेरि त्यही शव्द दोहोरिन थालेको छ, फरक यति मात्र हो, राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा मधेसी जनताको नाम जोडिन आएको छ- “मधेसी चोर देश छोड” ।
के बिग्रन्छ यदि बुद्ध प्रदेश, सगरमाथा प्रदेश, पशुपति क्षेत्र प्रदेश, अन्नपूर्ण प्रदेश, मिथिला प्रदेश, सेती-महाकाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, मधेस प्रदेश, तराई प्रदेश आदि राखेर अघि बढ्दा ?
अस्तव्यस्त भएपछि कसले राष्ट्र अघि बढाउने ? हजारौं हजार वर्षको निरन्तरता पाएकोराजतन्त्र र दुई सय पचास वर्ष पहिले नेपाल निर्माण गरेर प्रभाव जमाएको गद्दीको उत्तराधिकारी राजालाई त बाह्य शक्तिको कारण हामीमा एकता नभएकाले र हामीहरुवीच नै धेरै दलालहरु भएकाले चुपचाप श्रीपेच फुकाल्न वाध्य हुनुपर्‍यो ।
अहिले न त श्रीपेचधारी छन् न त प्रभाव भएको कुनै त्यस्तो व्यक्ति छन्, त्यसमा पनि तराई-मधेस बाहेक कुना-काप्चामा असंतोषको राँको बलेको बेला- कसले धान्न सक्छ यस्तो भयावहको परिस्थिति । यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, झुट र जनता ठग्ने, राष्ट्र लुट्ने प्रवृत्तिले जन्माएको हो ।
राष्ट्र असफल भइसकेको छ वा सही ठाउँमा छ, खोजको ठूलो विषय नै रहेन अब । एउटाभूकम्प र छिमेकीको सय दिनसम्मको हर्कत झेल्न नसक्ने अवस्थाको कारक गणतन्त्र,संघीयता, धर्म-निरपेक्षता तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ ।
कुनै व्यक्तिको इतिहासमा नाम लेखाउन गणतन्त्र, विदेशीको ईच्छामा धर्म-निरपेक्षता लादिरहन, छिमेकीको फाइदाका लागि संघीयता कायम राखिरहन जरुरी छैन । नेपाली बहुसंख्यक जनताको हित र अल्पमतको रक्षाको निमित्त गणतन्त्रले सृजित संपूर्ण अवशेषहरु तत्काल निलम्वन गरिनु पर्दछ ।
ढीलो-चाँडो नेपाली जनता आफैले यसको निमित्त प्रयास गर्ने नै छन् । गृहयुद्धले विकराल स्थिति आउनु अगावै सोचियोस् । भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, “युद्ध तब श्रेष्ठ हुन्छ जब त्यसको लक्ष्य महान शान्ति हुन्छ न कि महान-अभिमानको पूर्ति ।
बीर त्यो होईन, जसले पल-पल युद्धमा उपस्थित देखाउँछ, बीर त्यो हो जसले संभव भएसम्म युद्धलाई टाल्दछ” । मधेसीलाई गाली गर्ने समय भड्किसकेको छ, कहीँ श्री कृष्णले भन्नुभएको जस्तो उनीहरुले गृह-युद्ध टालिरहेका त छैनन् ? सोच्न ढीला नगरौं ।	Read 603 times	Tweet
« अब रामचन्द्र र सिटौलाहरुको पछि लागदिन, भोलि नै आन्दोलनमा जान्छु-चौधरी मधेसमा जन्मेको मान्छे हुँ, बन्द हडताललाई कहिल्यै समर्थन गर्दिँन 'माग पूरा नगर्ने भए सरकारले बल प्रयोग गरोस्'-पशुपति मुरारका »